आज सोनाम ल्होसार मनाइँदै « LiveMandu
२२ माघ २०७५, मंगलवार ०६:०३
सोनाम ल्होसार योल्मो र तामाङ्ग जातिका मानिसले मनाउने गर्दछन । यसको अर्काे नाम हो स्वनम ल्होसार । स्वनमको अर्थ हुन्छ पुण्य । त्यसकारण यसलाई पुण्य संवत्सर भनिन्छ । प्रत्येक वर्ष माघ महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने प्रतिपदा तिथीको दिन मनाइने सोनाम ल्होछार र चिनिया नयाँ बर्ष एकै दिन मनाइन्छ । यो माघे सक्रान्तीको आसपास पर्दछ तर कहिलेकाँही ग्रहहरुको उतारचढावका कारणले मलमास भएको बर्षमा चाडपर्वहरुको तिथिमा पनि फेरवदल हुने भएकाले यसपाली भने केहि दिन पछि माघ २२ गतेको दिनमा सरेको छ ।
बौद्ध धर्मावलम्बीहरुले आजको दिनलाई आफ्नो सांस्कृतिक पर्वका साथसाथै नयाँ बर्षका रुपमा मनाउने गर्दछन् । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास रहँदै आएका तामाङ समुदायले सोनाम ल्होछार मनाउँदै गर्दा उत्तर छिमेकी मुलक चीन सहितका बौद्धमार्गीहरुको घनत्व रहेका क्षेत्रमा नयाँ बर्ष- नयाँ दिनका रुपमा मनाइदै आएको छ । विशेषगरी नेपालमा तामाङ जातिले सोनाम ल्होसारका अवसरमा कुलपूजा र प्रकृतिको पूजा गर्ने गर्दछन् । आज तामाङ समुदायमा छोरीचेलीलाई बोलाएर टिका लगाईदिने गरिन्छ । नेपालको एक प्रमुख जाती तामाङको विशेष साँस्कृतिक पर्व भएका कारण विक्रम सम्बत् २०६४ साल यता सोनाम ल्होसारलाई राष्ट्रिय पर्व स्वरुप नेपाल सरकारले सार्वजनिक विदा दिंदै आएको छ ।
यो पर्व घर आगन लिपपोत गरी चोखो पारिन्छ र आँफु पनि नुहाएर पुजा गरिन्छ । अनि लामा पुरोहित वाट वा घरको मुलीबाट पुजापाठ गराइ गहुँको पिठो आकाशतर्फ उडाएर देवताको विजय र भुत प्रेतको हार होस भनि कामना गरिन्छ । अनि मान्यजनबाट आर्शिवाद लिँदै बाबरी रोटी, फुरौला, कन्दमुल आदि खाने पनि गरिन्छ ।
ल्होसार सम्धन्धी अधिक जानकारीको लागि तलको लिंकमा थिच्नुहोला ।
साझाको प्रश्न – के नेपालका प्रधानमन्त्री भारतीय खुफिया प्रमुखका समकक्षी हुन्?
काठमाडौं । भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ ९रअ० का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले संक्षिप्तरूपमा अचानक नेपाल भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री
Plane Crash at Ukraine
Ukraine Air Alliance flight 4050, an Antonov An-12, crashed on appproach to Lviv-Danylo Halytskyi International Airport, Ukraine. The aircraft departed
आज श्रीस्वस्थानी बर्त कथा समापन गरिँदै
पौष शुक्ल पुर्णिमा देखि बाचन गरिएको श्रीस्वस्थानी बर्तकथाको आज समापनको दिन रहेको छ । आज भन्दा ठिक एक महिना अघि
सन्दिपको कडा आपत्ती
नेपालको एक गहनाको रुपमा रहेका लामिछाने हाल अष्ट्रेलियाको विग ब्यास लिगमा क्षमता देखाउन ब्यस्त छन । उनी आइ पि एलमा